Manambàka Sy Maharomotra Ireo Shinoa Manampahefana Mpanao Sivana Ilay Sarinteny Ankamantatra Momba Ny Fetiben’ny Fanilo · Global Voices teny Malagasy
Manambàka Sy Maharomotra Ireo Shinoa Manampahefana Mpanao Sivana Ilay Sarinteny Ankamantatra Momba Ny Fetiben'ny Fanilo
Voadika ny 19 Marsa 2018 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, English, Italiano, Español, Deutsch, English
Fanilo Dragona avy amin'ny Wikipedia. CC-BY 2.0
Zavatra telo no tiako eto ambonin'ny tany.
Ny masoandro, ny volana ary ianao.
Ny masoandro amin'ny maraina, ny volana amin'ny alina,
Ary ianao mandrakizay.
Novoizina tao amin'ny iray amin'ny vondron'ny WeChat-ko nandritra ny Fetiben'ny Fanilo tamin'ny 2 Martsa 2018 io tononkalo eo ambony io, ary vetivety teo dia lasa sarinteny ankamantatra momba ny fanilo ho fantarin'ny olona. Fantatry ny rehetra ao anaty vondrona fa fanesoana ilay volavolam-panitsiana ny lalàm-panorenana napetraky ny Antoko Kaominista Shinoa (CCP) vao haingana momba ny fanafoanana ny fepotoana fiasàna roa ho an'ny filoham-panjakana izany.
Mazava ho azy, fa tsy nisy nandefa valiny, satria fantany fa mety hitarika ny fanivànana ilay tranonkala izany. Mankasitraka fotsiny ry zareo (amin'ny fampakarana ankihibe). Iray amin'ireo ohatra marobe amin'ny andrana vaovao ataon'ny mpisera amin'ny aterineto Shinoa mba hialàna amin'ny sivana momba ny fanitsiana ny lalàm-panorenana io sarinteny ankamantatra momba ny fanilo io. Izao no antony : teny vaovao no valin'ilay sarinteny ankamantatra — “Xi mandrakizay” (習到永遠) — izay, nasolo ilay fomba fiteny hoe ” Mandrakizay doria”, nanomboka ny 25 Febroary 2018 nivoahan'ilay volavolam-panitsiana ny lalàm-panorenana ho fanta-bahoaka.
Navoaka tamin'ny 25 Febroary ilay fanambaràna. Sosokevitra nomen'ny Komity foiben'ny CCP ny hamonoana ilay andàlana ao amin'ny lalàm-panorenan'ny firenena izay milaza fa ” tsy mahazo miasa mihoatra fepotoam-piasana roa misesy ” ny filoha na ny filoha lefitra . Mety hanokatra ny làlana mba hitondran'ny filoha Xi Jinping mandritra ny fotoana tsy voafetra io sosokevitra io.
Mba hampiatoana ny olona tsy hanao fanehoankevitra na hitsikera io fanafoanana ny fetran'ny fepotoam-pitondràna in-droa io, dia nametraka lisitra lavabe momba ny teny sy ny fiteny ho voasivana ny mpanivana tranonkala Shinoa. Teny ho voasivana manodidina ny 60 no noraketin'ny China Digital Times, hatramin'izao, izay ahitàna ireto manaraka ireto :
Ny nofin'ny Emperora (皇帝梦) — lohatenin'ilay sarimiainan-tsaribakoly tamin'ny 1947
Fanindrahindràna ny maha-olona (个人崇拜) — Vakio bebe kokoa ny momba ilay fanentanana fanaovana sary izay nokolokoloin'ny haino aman-jerim-panjakàna tsy tapaka nandritra ny fe-potoana voalohany niasan'i Xi
Ho ela velona (万岁) — ara-bakiteny ” an'alin-taona “
Miakatra eo amin'ny seza fiandrianana(登基)
Yuan Shikai (袁世凯) — Ilay mpitarika ady lehibe nandritra ny faran'ny fitondran'ny taranaka Qing, Yuan no lasa filoham-pirenena ôfisialin'ny Repoblika vaovaon'i Shina tamin'ny 1912. Tamin'ny 1915 novàny ho fanjakan'olon-tokana manaraka ny foto-pisainan'i Conficius i Shina.
Fanavaozana zato andro (戊戌变法) — Hetsika fanavaozana tsy nahomby nataon'ny Emperora Guangxu tamin'ny fitondran'ny taranak'i Qing, nofoanan'ny fanonganam-panjakàna notarihan'ny mpomba ny Emperora vavy Dowager Cixi.
Toerana fiompiana Biby (动物庄园)
Rafitra ho an'ny fiainana (终身制)
Mifindra monina (移民) — Araka ny vaovao, voalaza fa nahita karazany maro be ny fikarohan'i Baidu momba io teny io.
Lany henatra (不要脸)
Lasa fomba mahazatra hialàna amin'ireo fandrika tahaka izany ny sarinteny ankamantatra. Mivezivezy any amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra ny ampahany betsaka amin'ny lalaon-teny mampiasa saina tahaka izany, na nisy aza ireo mpisera amin'ny aterineto sahy mitsofotsofoka any amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, tamin'ny fampiasàna ny Zhifu, vovonan'ny fanontaniana sy valiny malaza indrindra any amin'ny tanibe Shina, mba hanambakàna ny mpanivana ny tranonkala. Mieritreritra ny olona fa ny fihetsika sahisahy toy izao no nitarika ho amin'ny fampiatoana fito andro ilay fampiasa Zhifu. amin'ny magazain'ny fampiharana rehetra.
Araka ny fanamarihana nataon'ny Fitantanana ny Habaky ny aterineto tamin'ny 2 Martsa 2018 ( avy amin'ny China Digital Times):
Satria baranahany ny fanarahamaso ary tsy ara-dalàna ny fanaparitahana vaovao, dia alàna mandritra ny fito andro tsy ho eo amin'ny magazain'ireo fampiasa ny ‘Zhifu’ araka ny lalàna sy ny fitsipika mifanaraka amin'izany. Raha ny marimarina kokoa dia manomboka androany amin'ny 3 ora hariva ilay fampiatoana ary mifarana ny 9 Martsa amin'ny 3 ora hariva.
Tsy mamaritra mazava tsara ny atao hoe fampitàm-baovao tsy ara-dalàna ilay filazana, na hoe nahoana no sazy henjana tahaka izany no didiana ho an'ny vovonana izay nitaky ny fahamarinana amin'ny CCP amin'ny fametrahana ny rantsan'ny antoko any amin'ny orinasa. Satria nolazaina fa maika io fanambarana io nandritra ny fetiben'ny fanilo dia nisy mpisera amin'ny aterineto sasany nanondro ny iray tamin'ireo andiana fanontaniana sy valiny mifanaraka amin'izany :
Fanontaniana: Raha mbola mandeha foana ny mpamily na dia efa vizana aza, raha tsy misy fifandimbiasana, inona no tokony ataon'ny mpandeha ?
Ity valiny voasoratra amin'ny fiteny mahazatra izay hita amin'ny fampielezankevitra politika ity, no ‘be mpitia’ indrindra amin'ireo valinteny rehetra natolotra :
Valiny: ao anatin'ny zava-mitranga goavana tahaka izany, dia tsy maintsy manapaka hevitra isika ary miaraka amin'ny mpamily ; tombotsoa lehibe izay porofoin'ny fampiharana izany. Ny mpamily, tsy isalasalàna, no olona mahay indrindra mifehy ny lalao. ‘Ndao isika hipetraka amin'ny zava-misy marina amin'ny famantarana ny ho avy, [ny mpamily] dia mety hitarika antsika hanangana…. ny azo antoka sy mamiratra.
Na tsy mivantana aza ny fifandraisana eo amin'ny mpamily sy ny filoha Xi Jinping, ny ankamaroan'ny mpamaky shinoa dia nahafantatra ny valin'ilay sarinteny ankamantatra ary nihomehy izany. Mazava ho azy, fa tsy naparitaky ny Fitantanana ny HAbaky ny aterineto io vazivazy io.
Ho setrin'io fampiatoana io, dia nampanantena ny Zhifu fa hanamafy ny fepetran'ny sivan-tenany. Ny marina, andro vitsivitsy taorian'ny nanambaràna ilay volavolam-panitsiana ny lalàm-panorenana, dia fampitàm-baovao nampidi-doza 40.000 no novonoiny ary kaonty 1.200 no naatony.
Na izany aza, ilay filazana fampiatoana fito andro dia manondro fa na ny mpandàla ny sivan-tena aza dia tsy mahafeno ireo fepetra andrasan'ny vanim-potoana vaovao.